အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးမြင့်သော Glow Plug လက်ကား - 1D Auto Parts Co ။ , Ltd ။ ကုန်သွင်းသူ | 1D;ONE
1D; အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးမြင့်သော Glow Plug လက်ကား - 1D Auto Parts Co ။ , Ltd ။ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ, 32 ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ, နေ့စဉ်ထုတ်ယူနိုင်သောစွမ်းဆောင်ရည် 40,000 PCS Piston, PCS PASS ပစ္စတင်လက်စွပ်
1D အရည်အသွေးမြင့်သော Glow Plug ကိုလက်ကားလက်ကား - 1D Auto Parts Co ။ , Ltd ။ Japan NPR နည်းပညာနှင့် 170 တွင်လေ့ကျင့်ထားသောပညာရှင်များ, CCIP အပေါ်ယံပိုင်း, ISO / TSL6949-2002 အရည်အချင်းပြည့်မှီသောပညာရှင်များ, ISO / TSL6949-2002, ISO-2014 အတည်ပြုခဲ့သည်။
ထုတ်ကုန်၎င်း၏ပုံသဏ္ letter ာန်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်။ insole, midsole, cork ဖြည့်ခြင်း, Outer Sole နှင့်ဖနောင့်အားလုံးသည်ဖိအားကိုခံနိုင်ရည်ရှိရန်ကြံ့ခိုင်ရေးဖြစ်ရန်ထုတ်လုပ်သည်။
1. JPR NPR နည်းပညာနှင့် 170 သည်လေ့ကျင့်ထားသောပညာရှင်များ, CCIP အပေါ်ယံပိုင်း, ISO / TSL6949-2002, ISO-2014 မှအတည်ပြုခဲ့သည်။
3.32 ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ, နေ့စဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် 40,000 PCS Piston, PCS PASS ပစ္စတင်လက်စွပ်
အမျိုးမျိုးသောအလင်းရောင် plugs အမျိုးမျိုးရှိသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင်အများဆုံးအသုံးပြုမှုအများဆုံးအမျိုးအစားသုံးမျိုးသည်သမားရိုးကျအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ Computer Automatic Control type (Preheating Preheting Device နှင့် Super Preoming Device အသစ်), သမားရိုးကျ Super Preheating Device အတွက် Voltage အမျိုးအစားနိမ့်။ တောက်ပသော plug ကိုအင်ဂျင်တစ်ခုချင်းစီကိုလောင်ကျွမ်းနေသောအခန်းတစ်ခန်းစီသို့လွဲချော်သွားသည်။ Glow Plug Housing တွင် Glow Plug ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်တုတ်ချောင်းတွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ လက်ရှိပိုက်ကိုအပူကိုအပူပေးနိုင်သည့်ခုခံနိုင်စွမ်းကိုဖြတ်သန်းသွားလေ၏။ ပိုက်သည်ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်အကျယ်ရှိပြီးအပူစွမ်းအင်ပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ပိုက်၏အတွင်းပိုင်းသည်တုန်ခါမှုကြောင့်ပိုက်လိုင်း၏အတွင်းပိုင်းနံရံကိုဆက်သွယ်ခြင်းမှတားမြစ်ထားသည့်ကွိုင်ကာကွယ်တားဆီးရေးကိုကာကွယ်ရန်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ပြည့်စုံသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောဘက်ထရီဗို့အား (12V သို့မဟုတ် 24V) နှင့် preheating device ကိုအသုံးပြုသောကြောင့်, အမျိုးမျိုးသောအလင်းရောင် plugs ၏ rated voltage သည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ထို့ကြောင့်, မှန်ကန်သောမော်ဒယ်လ်နှင့်အတူ preheating plug ကိုအသုံးပြုရန်သေချာပါစေ။ မမှန်ကန်သော preheating plug ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အချိန်မတန်မီသို့မဟုတ်မလုံလောက်သောအပူကိုလောင်ကျွမ်းစေလိမ့်မည်။
Glow Plugs မှနိဒါန်း
Glow Plug, Glow Plug ဟုလည်းလူသိများသည်။ ဒီဇယ်အင်ဂျင်သည်အလွန်အမင်းအအေးမိခြင်းတွင်အအေးခံသောအခါ Glow Plug သည်အပူစွမ်းအင်ကိုတိုးတက်စေရန်အပူစွမ်းအင်ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် Glow Plug သည်မြန်ဆန်သောအပူချိန်မြင့်တက်လာခြင်းနှင့်အပူချိန်မြင့်မားသောအခြေအနေများတည်မြဲသောလက္ခဏာများရှိသည်။
1. Preheating အချိန် -3စက္ကန့်နှင့်အပူချိန် 1000 ကျော်ရောက်ရှိနိုင်သည်
2. အပူပေးသည့်အချိန် - အင်ဂျင်စတင်ပြီးသည့်နောက်အလင်းရောင်သည်လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုလျှော့ချရန်စက္ကန့် 180 အတွက်အပူချိန် (1000 ℃) ကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။
3. operating အပူချိန်: 1000 ℃
4. pwm အချက်ပြထိန်းချုပ်မှု
1D Auto Parts Co. , Ltd တွင် 2012 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ , ငါတို့ 1D Auto Parts CO ။ , LTD ။ Auto အစိတ်အပိုင်းများကိုကျော်ကြားသောထုတ်လုပ်သူများမှာ& ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့် crankshaft ကိုကုန်သွယ်မှုစသည်တို့ကိုကုန်သွယ်မှုဖြင့်ကုန်သွယ်မှုကိုပြည့်စုံစွာရောင်းဝယ်နိုင်သည်။ Yuguangwei ၏ ဦး စီးမှုအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးကွက်တွင်မှတ်သားထိုက်သောရာထူးတစ်ခုရရှိခဲ့သည်။